မတူကွဲပြားသော လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာ… တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော Public | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » မတူကွဲပြားသော လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာ… တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော Public
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Nov 14, 2013 in Complaint / Claim, Creative Writing, Critic, Editor's Choice, Think Different | 36 comments
လမ်းသွယ်ထဲမှာ ဆူဆူညံညံနဲ့ ဒီဂျေသံကြားနေမိတယ်…
မီးတွေလဲ ထိန်ထိန်လင်းလို့… နိုင်ငံခြားက နိုက်ကလပ်တစ်ခုကိုတောင် သတိသွားရမိပါသေး၏…
အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်ဆိုလဲ ဟုတ်ရဲ့… နီနီခင်ဇော်ဆိုလဲတမူ… ဖြူဖြူကျော်သိန်းလဲ ချန်မထားခဲ့ကြ…
ဒီဂျေသံများနှင့် လမ်းကြိုလမ်းကြား… လမ်းမကြီးငယ်… အသွယ်သွယ်မှာ…
မြင်နေကြားနေရသမို့… အမြင်မပါ…အသံနှင့်ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဆိုလျှင်… ရန်ကုန်မြို့လုံးကျွတ်…
ကပွဲဆင်နွဲနေသလား… ရာဇ၀င်ထဲက နက္ခတ်သဘင်ဆင်ယင်နေသည့်အလား အထင်ကိုမှောက်မှားစေနိုင်ပါ၏…
တကယ်တော့ ဒါဟာ… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ… ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲအတွက်…
အလှူခံနေခြင်း… ပဒေသာပင်များကို ဆိုက်ကားများနှင့်တသွယ်… လူများထမ်းလို့တမူ…
လမ်းမများ… လမ်းထိပ်များ…လူသွားလမ်းဘေးများမှာ ချပြထားပြီး… အလှူခံနေကြခြင်းပါတဲ့…
ဒါဟာ… အလှူခံနေခြင်းပါတဲ့… နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဖြောင့်ဖြူးဖို့ အထောက်အပံ့တွေအတွက်…
ရပ်ကွက်ထဲကအလှူခံ… မိုးလင်းတာနဲ့ညံလို့… မရပ်မနား မိုက်ခွက်နားမှာ စေတနာရှင်… အလှူခံပေးသူများ…
ဇာတ်တော်များကတဖုံ… တရားတိုတရားစများတသွယ်နဲ့… လှူဒါန်းမည့်သူများရဲ့ နှလုံးသားက စေတနာသဒ္ဒါတရားကို ချွေချနိုင်ဖို့…
ဇနကထုံးနှလုံးမူ… မလျော့သောဇွဲနဲ့ အလှူခံသူတွေကိုလဲ ချီးကျူးမိပါရဲ့…
ဘာ့ကြောင့်အလှူခံနေပါသလဲ… ပဒေသာပင်တွေသီးလို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို ငွေကြေးအခိုင်လိုက်လှူဒါန်းဖို့အရေး
ရည်ရွယ်ချက်လေးကောင်းပါရဲ့… မွန်မြတ်ပါရဲ့… နောက်ဆက်တွဲတော့ ဒါပေမယ့်နဲ့ဆက်ပါရစေ…
တစ်ယောက်ထဲသီးခြားခွဲထွက်မနေနိုင်တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာဖြင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ Private နဲ့ လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာ
(Public)ရဲ့ကျင့်ဝတ်… လူ့ကျင့်ဝတ်တချို့ကို ခွဲခြားမမြင်နိုင်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားဆိုရမပေါ့…
လူ့အခွင့်အရေးမရဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ နွားခြေရာခွက်ထဲနေခဲ့ရတဲ့ ခေါက်ရိုးကျေစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်လား သေချာမဆိုနိုင်ပေမယ့် လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့ မည်သည့်ဘာသာရေး အစွဲမှမပါဘဲ… ထိုသူသည်လူဟူသောပေတံတစ်ခုထည်းနဲ့တိုင်းတာကြည့်ရမယ့် လူအများစုဝေးရာ…
ထပ်ပြီးအတိအကျဆိုရရင်… ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ… ဆက်ခံသည့်လူမျိုး… မတူညီသည့်ကြိုက်နှစ်သက်မှု ကွဲပြားသောခံစားမှုစသည်တို့
ရောပြွန်းနေသော Public မှာဖြင့် ဘယ်အရာကတော့လုပ်သင့်တယ်… ဘယ်အရာကတော့ဖြင့် မလုပ်သင့်ဘူး… စသည်ဖြင့် ကြည့်တတ်… မြင်တတ်… သိတတ်ဖို့လိုပါပြီ…
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မြင်သော အချို့အချို့ကို ပြောပြလိုပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ ခရီးဝေးများကို မော်တော်ကားကြီးများနှင့်သွားဖူးကြပေလိမ့်မည်…
ကျွန်တော်တွေ့မိ သတိထားမိသည်မှာ… စပီကာသေးသေး… အသံအရည်အသွေးခပ်ညံ့ညံ့မှထွက်လာသော…
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံကနေ လျှပ်စစ်ပစည်းများဝင်လာတော့ သီချင်းနားထောင်လောက်ရုံ သီချင်းဖွင့်ရုံ အရည်အသွေးခပ်ညံ့ညံ့တွေ လူတွေလက်ထဲရောက်ကုန်တယ်…
ပေါပေါပဲပဲနဲ့ရတယ်… သီချင်းတွေနားထောင်ရတယ်… အဲဒါနဲ့နောက်ဆက်တွဲပါလာတာက လူအများနဲ့ ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ တခြားလူတွေ အိပ်စက်အနားယူချင်မှန်းမသိ… ကိုယ်ဖွင့်သောသီချင်းက တခြားသူကို စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေမှန်းမသိ… လူများရှေ့ (Public) မှာ စပီကာပေါက်စနဲ့ သီချင်းဖွင့်ကြသော လူငယ်များ…
မနက်မိုးလင်းလင်းခြင်း… တစ်လမ်းလုံး တစ်ညလုံး ကားစီးလာလို့ ပင်ပန်းရတဲ့ကြားထဲ… တရားထဖွင့်တဲ့ လူကြီးများ…
ရေဒီယိုကို လူကြားသူကြားထဲ ကွီကွီကွမ်ကွမ်လိုင်းဖန်းတတ်သူ… ရေဒီယိုချစ်သူသက်ကြားရွယ်အိုများကို… တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်…
တရားပဲဖွင့်ဖွင့်… သတင်းပဲနားထောင်ထောင်… သီချင်းနဲ့ပဲဖျော်ဖြေ… ဖျော်ဖြေပါ…
အများတကာနဲ့သွားလာ ဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာ မိမိလုပ်ချင်တာထက်… Public ကို အားနာစေ့ချင်ပါတယ်…
Public အပေါ် ဂရုပြုစေချင်ပါတယ်… ဘာဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်… လူအများကြားမှာ တစ်ဦးမဟုတ် တစ်ဦးကို
တစ်ခါ အဲယားကွန်းခန်းရှိတဲ့ကြေးအိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်ထိုင်ပြီးမှာစားမိပါတယ်…
နံရံမှာလဲ No Smoking ဆိုတဲ့ သင်္ကေတတွေ ကပ်လျှက်ရှိပေမယ့်…
ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ ဘေးဝိုင်းကလူကြီးတစ်ယောက် စီးကရက်ကို ဟန်ပါပါနဲ့ဖွာနေပါတယ်…
ကျွန်တော်မျက်လုံးစပ်လာတဲ့အထိပါပဲ… အဲဒါနဲ့ စားပွဲထိုးကောင်လေးကိုခေါ်ပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ ပြောခိုင်းရာမှာ… ကောင်လေးက သူမပြောရဲတဲ့အကြောင်းစကားပြန်လာပါသတဲ့…
နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရာက စကားများတဲ့အဆင့်အထိရောက်ခဲ့ပါ သေးတယ်…
မင်းလို ဆံပင်ရှည်နဲ့လမ်းသရဲကောင်ကများ ငါ့ကိုရာရာစစတဲ့…
ဟောဗျာ… Public ထဲမှာ လူဝင်ဆန့်အောင်မနေနိုင်တဲ့လူက ကျွန်တော့ကိုအဆင့်ခွဲလိုက်ပါသေးတယ်…
နောက်ဆုံး မန်နေဂျာထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ကို ၀ိုင်းပြောင်းပေးပါတယ်… ကျွန်တော်လိုချင်တာ ၀ိုင်းပြောင်းပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး… အဲဒီလူ… အဲဒီလိုလူမျိုးကို နောက်ထပ်တစ်ခါ ဒီလို Public နေရာမှာ Public ကို လေးစားစေလိုတဲ့အသိမျိုးပေးစေချင်တာပါ…
ဒီစာရေးတဲ့ ကျွန်တော်လဲဆေးလိပ်ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့လူဆိုတာ သိသူတွေ၊ မြင်ဖူးသူတွေ သိပါတယ်…
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကျွန်တော်တည်းတဲ့တည်းခိုခန်းဘေး မလှမ်းမကမ်းမှာ ဗလီတစ်ခုရှိပါတယ်…
တစ်ရက်ကျတော့ တည်းခိုခန်းရှေ့ ရပ်ကွက်ဓမာရုံမှာ အသံမစဲပဌာန်းပွဲကျင်းပ ပါတော့တယ်…
တစ်နေကုန် အလုပ်ပင်ပန်းလာတဲ့ ကျွန်တော်ညစာစားပြီး အိပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မီးမရှိလို့ အဲယားကွန်းမလာတဲ့အတွက်
ပူပြီးအိပ်မရသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ပဌာန်းသံရဲ့နှိပ်စက်မှုက အံ့မခမ်းမို့… ညလုံးပေါက် ငုတ်တုတ်ထိုင် ဆေးလိပ်သောက်နေခဲ့ရတဲ့နေ့ မနည်းခဲ့ပါဘူး…
နောက်တစ်နေ့မနက် အလုပ်လုပ်ရသူမို့ ပဌာန်းသံဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အရှင်လတ်လတ်ငရဲကျနေသူပါပဲ…
အကုသိုလ်များသူမို့ ပဌာန်းသံမခံနိုင်ဖြစ်နေသလားတောင် တွေးမိသေး…
အဲ… ပဌာန်းသံပြီးသွားတော့ သတိထားမိလာတာက မနက် (၅)နာရီမှာ တည်းခိုခန်းဘေး မလှမ်းမကမ်း ဗလီက မနက် (၅)နာရီ ဘုရားရှိခိုးသံပါဘဲ…
လော်စပီကာနဲ့ဟဲလိုက်တဲ့အသံ… အဲဒီလိုပဲ…ညနေတစ်ခါ (၅)နာရီခန့် ကျတော့တခါ…
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မိတဲ့နေ့မှာ အဲ့အသံအတွက် ဝေဖန်သံတွေကြားလိုက်ရပါတယ်…
ကျွန်တော်ရင်ထဲပြောလိုက်မိတာက… သူများအော်တာမကြိုက်ရင်… ကိုယ်လဲမအော်ဖို့ပါပဲ…
မတူကွဲပြားသောလူများနေထိုင်ရာ (Public) ကို လေးစားသင့်ပါသည်…
တစ်နည်းဆိုရသော်… တခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ခံစားချက်ကို လေးစားသင့်ပါသည်…
တစ်နေ့ ကျွန်တော့်အိမ်ရှေကဧည့်ခန်းမှာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်အကြောင်းလေးနဲနဲပါးပါး ပြောနေခိုက်… အိမ်ရှေ့ကို ထီရောင်းတဲ့ကားတစ်စီးထိုးဆိုက်လာပါတယ်… သီချင်းတွေညံနေအောင်ဖွင့်…
တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားတဲ့အထိ… အိမ်ထဲမှာစကားပြောရင်… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မကြားရတော့လို့…
ဟမ်… ဟမ်… ဖြစ်လာတဲ့အထိပါပဲ…
မိမိစီးပွားရေးအတွက် အိမ်ထဲကလူတွေကို ဒုတ်နဲ့ထိုးတော့မှာလား… သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဘုရားအာရုံပြု နေမလား…
မွေးကင်းစခလေးငယ်တွေ အိပ်နေမလား… နေမကောင်းတဲ့လူတွေနားနားနေနေနေနေ ကြသလား…
ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အများပိုင်လမ်းမှာ မိမိထင်တိုင်းကြဲတာဟာဖြင့် အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတဲ့အရာပါ…
မနေ့ကပဲ… အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ကားတွေပိတ်လို့ စိတ်ညစ်ညူးခဲ့ရပါသေးတယ်…
ရန်ကုန်ဆောင်းအ၀င် ခပ်ပြင်းပြင်းအပူရှိန်မှာ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းသမျှ အနားရမယ့်အိမ်ကို အပြန်…
လမ်းမှာ ဆိုက်ကား (၃)စီး… တစ်စီးက ပဒေသာပင်ကိုတင်… တစ်စီးမှာ အသံချဲ့စက်… တစ်စီးမှာ လက်ဆွဲ
မီးစက်ငယ်နဲ့ လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ဒီဂျေသီချင်းတွေဖွင့်… အလှူခံပါသတဲ့… ကားကြီးကားငယ်… အသွယ်သွယ် ပိတ်ပြီး
လူတွေဒုက္ခရောက်ရပါတော့တယ်… သူတို့ကုသိုလ်ရမရတော့မသိ… ကားပိတ်လို့ ရာသီဥတုပူလို့ ဒေါသထွက်မိတဲ့
ဘုရားဆင်းထုတစ်ဆူကို ကားပေါ်တင်… မီးတွေဆင်… ဖဲကတီပါတွေနဲ့အလှဆင်ပြီး…
ငွေဖလားကြီးတွေ ၀င့်ခါဝင့်ခါနဲ့ ဘီယာဆိုင်နား အလှူခံ… လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နားမှာ ဖလားထဲ ကျောက်ခဲထည့်ခေါက်နဲ့…
တရွေ့ရွေ့မောင်းတဲ့ကားနောက်မှာ တန်းစီပြီး လိုရာခရီးမရောက်လို့ သောကဝေနေကြတဲ့ လူပေါင်းများစွာကို
ဘုရားပြငွေအလှူခံ… ဘုရားလဲ ငွေရဖို့ကပြရတဲ့ မျောက်သာသာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပါပြီ…
ရဟန်းပေါင်းရာထောင်ချီသွားရင်ဖြင့် လူအများဆုံးရှုံးရချည်ဆိုပြီး ၀ါဆိုခိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အများအပေါ်အလေးထားမှုကိုဖြင့်
အလှူငွေရရင်ပြီးရော ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် သဘောထားတဲ့… အလှူခံပုဂ္ဂိုဟ်များ သတိလေးများ ချပ်စေချင်ပါသတဲ့…
အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရောက်တာနဲ့ ကြိုကြား ကြိုကြား အလှူခံလေးတွေတွေ့ရပါတယ်..
အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားတွေကြားမှာ အပြေးအလွှား အလှူငွေလေးကို သက်စွန့်စံဖြား ပြေးကောက်ကြတဲ့
အလှူခံရှင်ကြီးများကို သာဓုခေါ်ပါရဲ့… ဒါပေမယ့် အန္ဒရာယ်ဟာ အန္ဒရာယ်ပါပဲ…
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်အကူး ရေပက်ကစားကြချိန်မှာ ရေပက်ခံကားပေါ်ကလူတွေကို
နာအောင်ခွက်စောင်း ခုတ်တတ်သော ရေကစားကြသူများ…
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို အပြစ်အဖြစ်မမြင်… မဆုံးမခဲ့ကြသော ဆွေစဉ်မျိုးစက် ရှေးလူကြီးများမှမစ… ယခုလူကြီးများ…
သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်
ဗျောက်အိုးကားထဲပစ်သွင်းသလိုမျိုး စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်အောက်ထဲ ဗျောက်အိုးပစ်ထည့်ပြီး
ထို… သူများ… ထို… သူများ… ထိုသူများ…
လမ်းမပေါ်တွင်ဈေးရောင်းသော… လမ်းဘေးဈေးသည်အား နိုင်ငံတော်ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစရာအဖြစ်ထားသော…
စည်းကမ်းမရှိသော ယာဉ်မောင်းများ… တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲခြားမသိသော ၀န်ထမ်းများ…
တီထွင်ကြံဆမှုမရှိဘဲ လူ့ငမွဲများအားလည်ပင်းညှစ်… ချမ်းသာလာသောသူဌေးများ…
ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံထဲရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု…
စိတ်ဓာတ်ခွန်အား… အားနည်းမှု… ကိုယ်ချင်းစာတရားခမ်းခြောက်မှု…
တိုင်းပြည်ဆင်းရဲချင်… ဆင်းရဲပါစေ… အတွေးအခေါ်… စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမဆင်းရဲရင်ဖြင့်
အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ တိုင်းပြည်လဲ နွံအတွင်း သက်ဆင်းသလို… နစ်ပြီးရင်းနစ်… လှုပ်ရင်းမြုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ သတိရှိစေချင်ပါတယ်…
ဒီအကြောင်းချင်းရာများကို ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောမထားဘဲ… မိမိတို့လက်လှမ်းမီရာ… တတ်စွမ်းရာ ကြိုးစားမြှင့်တင်စေလိုကြောင်း…
အောင်မယ်လေးကောင်းလိုက်တာအေ။ ပြောတတ်လိုက်ချက်။ ပြောချင်နေတာ ပါးစပ်ကိုယားလို့။ အခုတော့ အဖော်ရပြီ။ ဘရာဗိုပါဖက်ဖက်ကက်ရေ။ လက်မအကြီးကြီးထောင်သွားပါတယ်
အဲ့ဒါ … အဲ့ဒါ …
ကျုပ်ကလည်း ပြောချင်နေတာ ….
ရေရေလည်လည် မိုက်လှပါသဗျာ … ဂွပ်ဘဲ …
ကျုပ် တွေ့သလောက် ပြောရရင် …
မြေနီကုန်း ဂမုန်းပွင့်နားက အလှူခံမဏ္ဍပ်ကြီးကလည်း ဟီးနေတာပဲနော် …
တစ်လမ်းစာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး မဏ္ဍပ်ဆောက်ထားတယ် …
အတော် ရီဖို့ ကောင်းတဲ့ လူတွေ ….
အများနဲ့တစ်ယောက်ဆိုတော့လဲ သွားပြောရင် နိပဲကြောင်ဘာဘီကျူးဖစ်သွားမယ် ၀တုတ်ရယ်
. မြို့ပိုင်မင်းဂျီး မိန့်ကြားဘူးတဲ့
. အိန္ဒိယတိုက်က ကုလားတစ်ယောက်ရေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့
.. လောကနီတိထဲ အဲ့ဒါဒေပါသလား
လောကနီတိက.. လူတန်းစားအဆင့်အတန်းအင်မတန်ခွဲတဲ့.. အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကလာတာမို့.. မြန်မာတွေထဲ.. အဲဒီ”ဇတ်”ခွဲတာကြီးမသိမသာ.. မြုတ်နစ်နေတယ်တွေးမိတယ်..
လုပ်​ထား ဘရာဗို အ​ဖော်​ရပြီ နာ့မှာ ……
စကားအတင်းစပ်.. ကျုပ်လဲ အဲလိုဆော်ချင်နေတာ
(ဟိုးတုန်းကလို ကွန်မန့် တစ်နံတစ်လျားကြီးနဲ့ စကားတွေ အချေအတင်မပြောချင်တော့တာတော့ ခွင့်လွှတ်ဗျာ)
ကိုကြောင်ဝတုတ်…..လူတိုင်း…အဲ့လိုအမြင်မျိုးရှိရမှာဗျာ..ဂုဏ်ယူုပါတယ်ဗျာ…ကိုယ်တွေရွာသားထဲမှာ တိုးတက်ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူ ရှိတာ..အလှုခံတွေ လော်တွေကိစ္စကတော့ ဘာသာခြားမို့. မကြိုက်ပေမယ့် .မှတ်ချက်မပေးရဲပါဘူးဂျာ ..ခွစ်ရှန်ကောင် ..ဒိဋ္ဌိ…ခွပ်..ခွပ် ဆိုလာမှာကြောက်လို့…အဟီးဟီး …အိမ်နားမှာ ဓမ္မာရုံရှိတယ်…
ဟုတ်ပဗျာ…။ တော်တော် နားမချမ်းသာဘူး။
ဟီးး..ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေကြားထဲ ဒါတွေသာသွားပြောလို့ကတော့ အသားထဲက လောက်ထွက်ကောင်ဆိုပြီး ဝိုင်းရိုက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်…. ဟိုဘက်မှာကလည်း ဟိုပို့စ်ကြီးနဲ့…
အရွယ်ရောက်ပြီး ပညာတတ်သူတွေ လိုအပ်တဲ့ နယ်ပယ်စုံ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ
ထောင့်စေ့အောင် နေရာမကျ မလုပ်ကိုင်ကြပဲ။ လူ့စွမ်းအား ဖြုန်းတဲ့
ဘုန်းကြီး၊ စစ်သား၊ သင်္ဘောသား၊ အရက်သမားတွေ စုနေကြတော့။။
ကဲ..ကဲ..ကဲ.. လမ်းသစ်လျှောက်ကြ သဂျီးခယ်မ အဘဘုတ်နဲ့ရ..။
ကျနော် ကတော့ ၊
အဲလို ဆူညံသံတွေ လုပ်ပြီး အလှူခံတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ၊ ဘယ်တော့မှ မ လှူဖြစ်ပါဘူး ။
ကျနော်တို့ လမ်း က လူတွေကလဲ မလှူတာ သတိထားမိပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက် / လမ်း ကို ဆူညံ အလှူခံ ၊ ထီသည် လာခဲပါတယ် ။
လူညီတော့လဲ OK ပါဘဲ ။ စိတ်ကိုချမ်းသာလို့ ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက် / လမ်း ထဲမှာ ၊
ရပ်ကွက် လူကြီး / ရာအိမ်မှူး တွေကလည်း တစ်နှစ်နေလို့ တစ်ခါ မတွေ့ရပါဘူး ။
ကျနော် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်တွေမှာမှ ၊ တကူးတက သွားတွေ့မှ ၊
ရပ်ကွက် လူကြီး / ရာအိမ်မှူး တွေ ဝေယျာဝစ္စ ဆိုပြီး ၅ သောင်း လောက်ပေးလိုက်တာဘဲ ။
ဖုန်းနဲ့ ကွန်းမန့် ပေးလို့ မရလို့…
လူတော်တော်များများ ရေးနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာပေပဲဗျ…။
ုဟုတ်တယ်…အဲဒီတင်ပြပုံက နည်နည်း ကွဲတယ်…။
ဆိုတော့…Like တစ်ချက် အသာနှိတ်လို့
ကထိန်ဆိုတာ စုပေါင်း လှူကြတန်းကြရတဲ့ သဘောဗျ…။
ဒီဘက်နှစ်တွေ မှာ ကထိန်အလှူတွေ ဘာကြောင့်ပိုဆူ ပိုမူးလာကြသလဲဆိုတာ
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆိုက်ကားနင်းလိုက် သောက်လိုက် မူးလိုက်
မဏ္ဍပ်ထိုး အလှူခံ သောက်…မူး ကြတာကအဓိကပါပဲ…။
အလှူခံရင်း ဂျေလို သီချင်းဖွင့်ပြီး မူးမူးနဲ့ ကနေကြသူတွေဟာ
အဲဒီ ဆိုက်ကားသမားတွေ များပါတယ်…။
အလှူခံရင်း လမ်းတစ်ခြမ်းကို ပိတ်လား…ပိတ်ရဲ့…။
(Public) ကို လေးစားသင့်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း
ဖြေတတ်လောက်တဲ့ အိုင်ကျူ ကလည်း ရှိပုံမရလို့
နောက်နှစ်ပို ဆိုး မည်…။
အဲဒီကိစ္စ စိတ်ပျက်နေတာကြာပြီ .. ဘယ်လိုလုပ်မှ အေးအေးဆေးဆေး နားအေးပါးအေး နေလို့ရမလဲ မသိဘူး … ပိတ်ရက်အေးအေးဆေးဆေးအိမ်ထဲမှာနေချင်လို့ တံခါးတွေအကုန်ပိတ် သော့ခတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ လူမရှိသလိုနေရင်တောင်မှ မရဘူး .. တံခါးအတင်းခေါက်ပြီး အလှူခံ .. ရပ်ကွက်ထဲကခွေးက လော်စပီကာသံနားငြီးပြီး ထဟောင်နဲ့ ..
အိမ်မျက်စောင်းထိုးနားက ဓမ္မာရုံကလဲ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ အလှူခံတယ် .. တရားဖွင့်တယ် .. ပိုဆိုးတာက မိုက်ခဲတွေက သူတို့အသံနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကို တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားအောင် မနက် ၄ နာရီထပြီး ရွတ်သေးတယ် … သူများတွေက အကြံပေးကြတယ် .. အလှူငွေသွားထည့်ပြီး လော်စပီကာရဲ့ ဦးတည်ရာကို ကိုယ့်အိမ်နဲ့ဝေးရာကို ရွေ့ခိုင်းလိုက်ပါလားတဲ့ … လော်စပီကာ ၃ ခု တောင်တပ်ထားပြီး တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားအောင် လုပ်ထားတာ ဘယ်လိုရွှေ့ရွှေ့ မရနိုင်တာသိလို့ သီးခံနေရတာပဲ …
ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် အလှူခံဆိုလို့ မယ်သီလရှင်တွေ အလှူခံတာလဲ တစ်မျိုးဒုက္ခပေးတယ် .. နယ်မှာဆိုတော့ ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့နေတဲ့အခါ တကူးတကထွက်ပြီး လောင်းရတယ်။ သီလရှင်တွေများလွန်းလို့ အဆင်ပြေသလို ရှိတာထုတ်ပြီး လှူလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတော့ သကြားလုံးထွက်ပြီး ထည့်တယ်။ ထည့်ပြီး အိမ်ထဲဘက်ပြန်လှည့်တုန်းရှိသေး သီလရှင်ကစိတ်ဆိုးပြီး သကြားလုံးကို လွှင့်ပစ်လို့လေ … စိတ်တိုလိုက်တာ .. သီလရှင်ကို ပြောပစ်လိုက်တယ် .. ဒီသကြားလုံးက လူစားတဲ့ဟာလို့ … အပေါစားလဲမဟုတ်ဘူး .. ဆရာလေးတွေ နေပူထဲလမ်းလျှောက်နေတာပင်ပန်းမှာစိုးလို့ စားဖို့လှူတာလို့ .. မလိုချင်ရင်တောင်မှ တနေရာရောက်မှ လမ်းဘေးကကလေးတွေကို ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ .. ဒီလိုလုပ်တာတော့ မကောင်းလို့ နောက်ဆို ဘယ်တော့မှ ခြံရှေ့မှာ အလှူလာမခံပါနဲ့လို့ …
သီလရှင် ကိစ္စမှာ မဝေ နားလည်မှုလွဲပြီထင်တယ်။ သီလရှင်တွေ ရပ်တည်ရပုံက အဖိတ်နေ့မှာပဲ အလှူခံထွက်ရတယ်။ ဒီတော့ တစ်လလုံးမှ ၄ရက်ထွက်တယ်။ အဲလိုထွက်ဖို့ သူတို့ မနက် ၂နာရီခွဲ အိပ်ယာက ထထားတယ်။ စားဖို့ချက်ပြီး ထမင်းဘူးထည့်၊ တစ်ယောက်က တောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ ထမင်းဘူးတွေနဲ့ စုရပ်မှာ စောင့်နေတယ်။ ကျန်တဲ့သီလရှင်တွေက အလှူခံထွက်၊ အဲလိုထွက်ရာမှာ ရန်ကုန်က ဈေးထဲမှာ တစ်ဆိုင်မှ တစ်ကျပ်လှူတယ်။ အိမ်တွေက ဆန်ဇွန်းတစ်ဇွန်းလှူတယ်။ သူတို့ခြေတိုအောင်လျှောက်ရတယ်။ ဆန်နှစ်ပြည်နဲ့ ငွေငါးရာ ရမှ ကျောင်းပြန်လို့ရတယ်။ အဲဒါ တစ်ပတ်လုံးအတွက် ကျောင်းမှာ စားရိတ်။ ဆန်နှစ်ပြည်နဲ့ ငွေငါးရာ မရမချင်း ကျောင်းပြန်လို့မရဘူး။ သူတို့အရမ်းပင်ပန်းခံပြီး လမ်းလျှောက်လာရတော့ စိတ်ဆိုးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စကတည်းက လှူတဲ့ပုံစံတွေ မှားနေကြတာ။ အမ တို့ကတော့ လှူကို မလှူဘူး၊ အေးရော။
အရင်ကတော့ ကျမလည်း အလှူအတမ်း အင်မတန်ဝါသနာပါတဲ့လူ။ ဈေးသွားတိုင်း သူတောင်းစားတွေကို လှူတယ်။ တစ်ရက်တော့ လှူနေကျ သူတောင်းစားက ကျမလာတာမြင်တော့ ဟေ့ – ဟိုရှေ့ကခွက်ထဲ ငါးဆယ်တန်လေး တစ်ရွက်လောက် ထည့်လိုက်စမ်းပါ နင်ကုသိုလ် ရတာပေါ့ လို့ ပြောတာခံရဖူးတယ်။ အဲဒီကတည်းက ဘာမှ မလှူတော့တာ။ ဘေးအိမ်နီးချင်းကို ပေးတာကမ်းတာတောင် သတိထားရတယ်။ ဟဲ့ နင်ကုသိုလ် ရတာပေါ့ လို့ အပြောမခံရအောင်။
ကိုဖက်ကက်ရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါနော်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ အလှူ အတမ်း မလုပ်ကြရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ လှူတဲ့လူက လှူနေလို့ အဲဒါတွေဖြစ်နေကြတာ။ လှူ မယ့်လူ မရှိရင် ရပ်သွားကြလိမ့်မယ်။ ထီကားတွေကိစ္စတော့ မပြောတတ်။
. အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်က ( ကိုယ့်ဖါသာ သတ်မှတ်တာ )
. ဒီလိုသဟဇာတ မဖြစ်တာကို သက်ဆိုင်သူတွေ သိရှိနားလည်အောင်
. ဘယ်လိုလုပ်မလည်းဆိုတဲ့ သဘောကလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်ပြောရမှာဘဲ
. အချို့က တစ်ကယ်မသိဘူး
. အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးကိစ္စဆိုရင် အချို့ပေါ့နော ( အချို့ )
. သူတို့မှာ တစ်ကယ်သဒ္ဓါစိတ်အပြည့်ရှိတယ်
. လူတွေသိစေခြင်လို့ လောနဲ့ဆော်ပြီးအသိပေးတာ
. တစ်ခါတစ်လေ သူ့သဘာဝ အရိုးခံ ကမြင်းကြောထပြီး အလှူခံကြတာ
. ( အချို့ကြတော့လည်း ပြောတော့ပါဘူး )
. ပြောခြင်တာက ကျုပ်တို့လည်းလုပ်ဘူးတယ် ရွာမှာ
. ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် အပီကစ်ပြီး ပျဲနေရင် အတင်းလိုက်အလှူခံတာ
. ဟိုမှာကတော့ ရွာလေ
. အချို့အလှူတွေဆိုရင် လှူခြင်လှူ မလှူခြင်နေ ကြေးသတ်မှတ်မှတ်ပြီး
. ဘါဘဲဖြစ်ဖြစ် အဘိဓမ္မာသဘောထဲက :mrfreen: ပြောရရင်
. သူ့သဒ္ဓါစိတ်နဲ့ မျောက်မူးလဲအောင် နားမဒိန်းကျင့်ပြီးအလှူခံနေတာကို
. ကိုယ်က နားမျက်စေ့မသက်သာလို့ ( ကိုယ်ပင်ပန်းလို့ )
. သူ့ကို မေစ္ဆရိယစိတ်ဖြစ်နေရင် တစ်ကယ်စိတ်ပင်ပန်းနေတာ ( စိတ်ညစ်ငြူနေတာ )
. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
. ဒီလိုကိစ္စတွေကို သက်ဆိုင်သူတွေ သိတတ်နားလည်တတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
. သူ့ကိုအပြစ်လို့ ပြောလို့ထူးလာမှာလား
. သူတို့တွေကို နားလည်ကြပါစေဆိုတဲ့ စေတနာလေးတွေရော ကိုယ့်စိတ်မှာတည်သလား
. တွေးနော တွေးဂျ
. အချို့ကိစ္စတွေက အတော်ဂွကျတယ်
. သွားဝေဖန်မိရင် ကိုယ်ကဘဲ မြေအမျိုခံရမလိုလို သူများကောင်းမှု့လုပ်နေတာကို
. ကိုယ်ကဘဲအဆိုးမြင်သလိုလို သဘောရောက်သွားတတ်သေးတယ်
. လှူခြင်မှန်းမသိမလှူခြင်မှန်းမသိ လိုက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဆို သများလဲ အားဂျီးအမြင်ကပ်ဒယ်
. တစ်ခါတစ်လေ လာသေးတယ် ခွေးမသားအလှူခံ
. အကြွေလေးဘဲလှူလဲရပါတယ်ဆိုပြီး ကပ်ကျစ်တဲ့အလှူခံကရှိလိုက်သေးတယ် ခွီး!!!
ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံ နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စလေး ပြောချင်တယ်ဗျာ ၊
ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံက ဝါတွင်း ၃ လ တနင်္လာတိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းတယ် ၊
သောကြာလောက်က စပြီး မနားတမ်း အလှုခံ ၊ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ ကြေငြာ ၊ နားတွေက မခံနိူင် ၊
အဲဒီပင်တိုင်မိုက်ခဲ မိန်းမကြီးက ချွဲပြစ်ပြစ် အသံနဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော် တို့ ဆွေတော်မျိုးတော် တို့ နဲ့
ထည့်ထည့်အော် ၊ ( အမယ် ငါက ဘုရားကျွေးတာ စားနေတာ ဆိုပဲ ) ဘာမှန်းမသိလို့ သူများမေးကြည့်တော့ ၁၀ % စား ဆိုပဲ ၊ ရသမျှထဲက ၁၀ % သူယူသတဲ့ ၊ သူကလည်း ဒီအလုပ်ပဲ လုပ်တာ ၊ နားငြီးလှတဲ့အပြင် ပိုဆိုးတာက ဆွမ်းလောင်းတဲ့ တနင်္လာ မနက် ၄ နာရီမှာ ဘယ်ကျောင်းတိုက်က သံဃာများ ကြွလာပါပြီ ဘယ်ကျောင်းတိုက်က သံဃာများ ကြွလာပါပြီ ဆိုပြီး လော်ကြီးနဲ့အော်တော့ ကျနော်တို့မှာ လန့်နိူး ၊ ဓမ္မာရုံက ကျနော်တို့တိုက်နဲ့ ကျောချင်းကပ် ၊ မျက်စောင်းထိုးက ဘုန်းကြီးကျောင်းကလည်း အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲဆို သေပြီသာမှတ် ၊ သူ့လော်စပီကာက ကျနော်တို့ ပြတင်းပေါက်နဲ့ အတန်းသား ၊ ထွက်ကိုပြေးချင်တာ ၊ ရလိုက်တဲ့ အကုသိုလ် ၊ နောက်တော့ အမေက ဂျာနယ်ထဲကနေ ထည့်ရေး ၊ လော်စပီကာ ဥပဒေကိုပါ ထည့်ပြ ၊ ဘယ်ကိုရေးတယ်ဆိုတာ အဲဒီ ဓမ္မာရုံက လူတွေက သိ ၊ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေကလည်း သိပေါ့  ၊ နောက်တော့ အတော်ငြိမ်သွားတယ် ၊ ရပ်ကွက်ကိစ္စ နဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အိမ်ကိုလာတော့ အမေက အဲဒီအကြောင်းထပ်ပြော ၊ အခု အတော့ကို ငြိမ်သွား တိုးသွားပါပြီ ၊
ယူအက်စ်..အယ်လ်အေရဲ့ ဆောင်းပေါ်လူးရှင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဥပဒေတချို့ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြဌာန်ပြီးသေသေချာချာကြီးကြပ်လုပ်သင့်တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ..အသံပေါ်လူးရှင်းအတွက်.. ရဲတစ်ကက်ပေးတဲ့စနစ်ကို ပြငှာန်လုပ်သင့်ကြောင်း…။
ပါ့ဗလစ်.. အလုံပိတ်အအေးခန်းထဲ..ဆေးလိပ်သောက်ရင်တော့..နားရင်းသာဖမ်းတီးပစ်ဗျို့.. . အဲဒီလူက လူသတ်သမားပဲ…။
Engaging in the installation, use, or operation of any loudspeaker or sound amplifying equipment inafixed or movable position;
For the purposes of giving instruction, directions, talks, addresses, lectures, or transmitting music to any persons ‘in or on any public street, sidewalk, park, or other public place;
For commercial purposes inaresidential area or within 500 feet thereof at any time H 15.02 [a] L.A.M.C.);
Within 200 feet of any hospital grounds or any school or church building while in use (115.02 [g] L.A.M.C.).
ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်မှစ တစ်ရာဆိုသလို လူတိုင်း အသိ သတိ ရှိကြရင်ဖြင့်
လူအများစုက ဒီလို ကထိန်အကြောင်းပြ အတင်းအလှူခံတာ၊လော်တပ်ဖွင့်တာ၊မူးရူးနေတာ၊ပေါက်တတ်ကရ သီချင်းတွေဖွင့်ကတာဟာ မြန်မာ့ရိုးရာထုံးစံလို့လည်းထင်နေကြတယ်၊လုပ်သင့်တယ်၊လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းမြင်တယ်။ကုသိုလ်ရနေတယ်လို့လည်း ထင်နေကြတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်တဲ့သူကလည်းလုပ်၊မကြိုက်တဲ့သူကလည်း ဘာသာရေးနဲ့ငြိမှာ ပြောရင် ငရဲကြီးမလားဆိုတာမျိုးတွေးပြီး လုံးချာလည်နေကြတာပါ။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်း မသင့်မှန်းသိသော်လည်း ထစ်ကနဲရှိ ဆန္ဒပြမယ်လုပ်တဲ့ လူတွေကို ကြောက်တာရော၊ ၂၀၁၅ မဲမရမှာ စိုးတာရောနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လွှတ်ထားလို့ ဒီနှစ်ပိုဆိုးနေပါတယ်။
ဘာသာရေး နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပါတာကြောင့် လူလူချင်း ပြောပြရင် မထိပါဘူး။
ခေတ်အမြင်ရှိတဲ့ အရှင် ဆေကိန္ဒ၊မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)တို့လို ဆရာတော်တွေက ဒါမျိုးမသင့်ကြောင်း တရားပွဲတွေကနေ ပြောဟောပေးရင် ပိုထိရောက်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။(ရွာအမှု ဘုန်းကြီးပတ်ပေါ့)
ကဖက်မှ မပြောရင် ဘယ်သူမှ မပြောရဲကြတော့ဘူးးးး
စူဠ အ၀ီဇိ နဲ့ မဟာ အ၀ီဇိ ကို ကြိုပွိုင့် ယူနေကြတာပါကလား…
တော်တော်များများက ဒီ ကိစ္စကို စိတ်ညစ် စိတ်ပျက် နေကြတာ
ဘာသာရေး နဲ့ နွယ်နေတာမို့ တတ်နိုင်သမျှ လက်ရှောင်နေကြတာ
ကိုမျိုး အမေ ဆရာမကြီးလို ကိုဖက် လို ပြန်ပြော ပြန်ရေး မှ ပဲ ဒီ ကိစ္စတွေက လျော့လာမှာ ( ပျောက်ဘို့တော့ မလွယ်ဘူး )
အားပေးပါတယ် ကျနော်တို့ လဲ လက်ခုပ်တီးရုံ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ လုပ်ပါ့မယ်
ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး (အမှန်က ခုတုံးလုပ်တာ) အခွင့်အရေးယူတာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာ အကျင့်ပါနေတာ ကြာပေ့ါ။
ကြည့်မြင်တိုင် ပဒင်းတန်းမှာ ၀ါတွင်းဆွမ်းလောင်းဆိုပြီး မနက်အစောကြီး လမ်းကြောတစ်ဖက်လုံးပိတ်ပြီး ဆွမ်းလောင်းဖို့အတွက် ကာထားတယ်။
ကြွလာတဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ ပြန်ကြွသွားတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ကာထားတဲ့ အကာအပြင်ဘက်ကနေ ပတ်ခိုင်းတယ်။
လမ်းရှင်းတွေကလည်း လက်ကိုင်မီးတွေ ၀ီစီတွေနဲ့ တက်တက်ကြွကြွပဲ။
အဲ- လမ်းသွားတဲ့ ကားတွေ ဆိုက္ကားတွေမှာသာ မလွတ်တလွတ်နဲ့ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းမှာ မနည်းသွားကြရတယ်။
ကျွန်တော်တို့အဖြစ်က ပြောချင်ပေမယ့်… ငရဲဆိုတာကြီးကြောက်နေရလို့…
ဘုရား… ဘုရားနဲ့ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာကြီးကို ခေါင်းငုံ့ခံနေရတာကြာပေါ့…
တရားပွဲလုပ်တာ… အလှူခံတာ… ကောင်းသောကုသိုလ်ပြုခြင်းလို့ပြောရလို့ရပေမယ့်…
အများသူငါသွားလာကြတဲ့ လမ်းကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားပြီ…
အဲဒီလိုပဲ… ကုသိုလ်ရေးလို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရုံနဲ့ စည်းမရှိကမ်းမရှိလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့
အတွေးအခေါ်မှားနေတယ်ဆိုတာကို သိအောင်ပြောရမယ်… သိအောင်တနည်းနည်းနဲ့လုပ်ရမယ်…
ဒီလမ်းကမှ ဖြတ်မသွားရင် အလုပ်မရောက်တော့ဘူး… အဲဒီအတွက် အချိန်စောပြီးအိမ်ကထွက်ရတယ်…
ကျုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို ကားပိတ်တာကတမျိုး… လမ်းပိတ်တာကတသွယ်နဲ့…
သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဖို့ရောက်မူ… ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင့်…
အဲဒီစာလေးကို မိတ္တူကူးပြီးတော့ ကားပေါ်ကနေလိုက်ကြဲရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ…
အဘပုကတော့ အားကုန်ရင်… သဂျီးဖင်ကို ဒုတ်နဲ့ထိုးပါဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ…
အဘပုရဲ့အားဖြည့်သွားတဲ့ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါနော….
ပြောချင်ရင် ပြောသာပြောချလိုက်… ရိုက်တော့လဲတစ်ယောက်တစ်လှည့် ဆေးရုံလာကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ…
ခွန်ခွန်ကြီး FB ကဟာ မတွေ့ခင်ကတည်းက စိတ်ပေါက်နေတာကြာပါပြီ…
ရေးဖို့မအားတာနဲ့ အခုမှတောင် ကော်မန့်လေးပြန်ရေးနိုင်တယ်…
ရွာထဲကို အရင်လောက်မရောက်ပေမယ့်… သံယောဇဉ်မပြတ်ပါဘူးကွယ်…
ကျုပ်က စိတ်ပေါက်လာရင်… ဘာတွေရေးတတ်လဲဆိုတာ ပြန်ဖတ်နော်…
နောက် ကာဂိုမှာ စကဒ်အတိုနဲ့ စတိတ်ရှိုးလုပ်ပြီး ဘုရားလှည့်တာ…
ဘာသာရေးလား… နိုင်ငံရေးလား… လူမျိုးရေးလား… ခွဲခြားမသိဘဲ… ရောချလို့ဖြစ်တဲ့ပြသနာတွေ…
အရက်သမားလဲလိုပါရဲ့… အရက်သမားမရှိရင် ဒီရွာကြီးဒီလောက်စည်ပင်မှာမဟုတ်… ဟီး
ဒါပေမယ့်… ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်…
တကယ်ကို ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ပြီး Pro ကြကြ…
စစ်သားလဲ Pro စစ်သား…
သင်္ဘောသားလဲ Pro သင်္ဘောသား..
ဘုန်းကြီးလဲ Pro ဘုန်းကြီး…
အရက်သမားကျပြန်ရင်လဲ Pro အရက်သမား…
အဲ့လိုဖြစ်နေရင်… ဒီပြသနာတွေ မရှိသလောက်ရှားသွားပါလိမ့်မယ်…
အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို…. အရက်သမားလဲ Pro ကျကျအရက်သောက်ရမယ်…
သောက်ရမယ့်နေရာ… သောက်ရမယ့်အကြောင်းပြချက်… သောက်ကြမယ့်ပေါင်းဖော်သူဆိုတာ
သင်္ကြန်အရက်သောက်တယ်… ကတယ်… မူးတယ်…
ဒါဟာ သိပ်ပြီးတော့ အပြစ်မပြောစရာမဟုတ်ပေမယ့်…
ကထိန်လှည့်ရာမှာ အရက်သောက်တယ်… ကတယ်… မူးတယ်ဆိုမှတော့ ပြောစရာဖြစ်လာပြီ…
နောက်ပြီး… လေးဘလက်ပြောသလို… အိုင်ကျူမမီဘူးဆိုရင်…
အဲဒီလူတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကရော… အဲဒီလူတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်သူတွေကရော…
ဒီလိုပဲ ဦးနှောက်မရှိ အိုင်ကျူမမီဘဲ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေဦးမယ်ပေါ့နော…
အဲဒီလိုပဲ အလှူခံနည်းသင်တန်းဆိုတာမျိုးလေးလဲ ပေးစေချင်ရဲ့…
တလောကကြားလိုက်ပါရဲ့… သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာအကုန်ခံပြီး ခေါင်းလောင်းသွန်းမယ်တို့…
အဲ့လို ရုပ်ဝတ္တုတွေက သာသနာကို မကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာများ သိကြရဲ့လား…
ဗုဒ္ဓဂါယာလဲ ရုပ်ဝတ္တုတွေဘယ်လောက်ရှိရှိ… နောက်ဆုံး ပျက်တာပဲလေ…
တကယ်တော့ လှူတဲ့လူကလဲ အကျိုးရှိမယ့်နေရာလေးများ လှူစေချင်ရဲ့…
အလှူခံမယ့်လူကလဲ ရတဲ့အလှူငွေကို သာသနာတင်မက… သာသနာကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်မယ့်…
သူတို့ မလောက်ငမှန်းသိနေပါတယ်… အဲ့လိုဘဲ… ကျောင်းကြီးရွှေအတ၀င်းဝင်းနဲ့မြင်တိုင်းလဲ…
အခုတော့ စီးပွားသာသနာရောက်နေပြီလို့ တွေးမိပါရဲ့…
မအားသူချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့… ကျေးဇူးပါနော့
တစ်ရက်ပေါ့… ရက်ကွက်ထဲကအလှူခံ… မိုက်ခဲပေါ့လေ…
မိသားစုတစ်စုက အလှူငွေ (၅၀၀၀)လာထည့်တယ်…
မိခင်ကြီးသေထားတာ ပူပူနွေးနွေး ရက်လည်ပဲရှိသေးတယ်…
ကိုမောင်မာင်… မ၀င်းဝင်း… မိသားတစ်စုမှ…
၀မ်းပန်းတသာဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါတယ်ရှင်… တဲ့…
သူကြီး (ခ) မြို့အုပ်မင်းပေါ့နော…
အခုလက်ရှိလဲ အကြုံးဝင်နေဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
လူလည်ခေါင်မှာ အသံပြဲကြီးနဲ့ လော်စပီကာဖွင့်တာ…
ဒါတွေဟာဆိုရင် တရားဥပဒေမစိုးမိုးတာရဲ့ ပြရုပ်တွေပေါ့…
သူကြီး… အဲ… မြို့အုပ်ကြီးရဲ့ ဥပဒေလေးလဲ အမှတ်တရကူးယူသိမ်းဆည်းသွားပါကြောင်း…
နှစ်ယောက်မှ သည် ၂၀၀ဆိုရင် သိပ်မကြာပါဘူး…ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမှာပါ…
ခက်တာက ပြုပြင်ရဲ… ပြုပြင်ချင်စိတ်ရှိဖို့ဗျာ…
အဲ့ဒီတော့ ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကို မက်ပြီး ပြင်မရတဲ့အမှားတွေကို အမှန်ထင်…
အခုတော့ ဘုံဆိုင်ကနေ လှည့်ပြန်မလို့လား… ဟီး
ဒါထက် နင့်အောက်က ဒေါင်းကွက်ကြားနဲ့ နာမည်က တိရစ္ဆာန်ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်း…
နီးစပ်ရာနဲ့ ကိုယ့်အနားက next generation ကိုပဲ ပြောပြ ပြုပြင်ရတော့မှာပဲ…
အဲဒီဘုရားလူကြီးတွေက ဘုရားကို မျောက်လိုပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေတာ…
အဲဒီလိုပဲ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတာနဲ့ ယူနီဖောင်းကိုလေးစားရမယ်…
ဘုန်းကြီးတွေ… သင်္ကန်းဝတ်ပြီး… သင်္ကန်းကိုလေးစားရမယ်…
ကျွန်မကတော့ ကိုယ်တိုင်ကော၊မိသားစုပါ သူများစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်အပြုအမူကိုအထူးရှောင်မိတယ်။
အွန်လိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်လောက်မယ့်လူတွေလောက်ကလွဲပြီး အခြေအနေကြည့်
ဖတ်ရွေးပို့စ်မှာ ရင်လာခုန်ဦး.. ဒါဗျဲ..
ဒါကိုတော့ တက်သုတ်ရိုက် ဖတ်မိခဲ့တယ်။
Congratulations လုပ်ခဲ့ မိလား မမှတ်မိလို့ …
Many Congratulations ပါ ချစ်သော ကြောင်ဝဝ လေးရှင့်။ :-))
.. အိမ်နားမှာ အလှူ ခံပုံ တစ်မျိုးရှိသေးတယ်.. လော်စပီကာကို ဆိုက်ကားပေါ်တင်၊ dvd ဖွင့်စက်တစ်လုံးနဲ့ ဟဲလို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာသီချင်းခွေများနဲ့.. လှူ ချင်သူများ ၁၀၀၀-၂၀၀၀ ထည့်ပြီးရင် မိုက်ခွက်ကိုင် တစ်ရပ်ကွက်လုံးကို နှိပ်စက်ဖို့ လိုင်စင်ရသွားပြီ.. ရွေ့လျား အလှူ ခံ ကာရာအိုကေပေါ့ (ဘာလိုင်စင်မှ မလိုဘူးမှတ်တယ်).. အိမ်ထောင့်က ဘီယာဆိုင်များရောက်ရင် ကိုကိုမူးများက အရက်၊ ဘီယာသာကြိုက်တာ ဘုရားတရားတော့ မမေ့ဘူးရယ်.. လူစိ အလှူ ငွေထည့် ဗမာရှေးသီချင်းများ ဟဲပြီး ကုသိုလ်ပြုကြတာ ကိုယ်တောင် ဘာသာမဲ့ဖြစ်မသွားတာ ကံကောင်း.. ဟင်း..
ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံက အသံချဲ့စက်ဖွင့်သည်ကို ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးက ကျယ်လောင်သည်ဟုပြောဆို၍ ငှက်ကြီးတောင်ဓါးဖြင့် ဝင်ခုတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၅ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မနောသိဒ္ဓိ ဆွမ်းလောင်းဓမ္မာရုံက အသံချဲ့စက်ဖွင့်နေသည်ကို အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဦးက ကျယ်လောင်သည်ဟု ဓမ္မာရုံသို့လာရောက်ပြောဆိုရာမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ပြောဆိုရာ ဓမ္မာရုံအတွင်းရှိနေသည့် ကိုအောင်ဝင်းအောင်က “ဘာဖြစ်တာလဲ” ဟုပြောရာ သက်နိုင်ကဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ပြန်သွားသည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းနောက် (၁၅)မိနစ်ခန့်အကြာတွင် သက်နိုင်က ငှက်ကြီးတောင်ဓါးကိုင်၍ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ကိုအောင်ဝင်းအောင်ကို ဓါးဖြင့် ဝင်ခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓါးဖြင့်ခုတ်ခြင်းကိုခံရသဖြင့် ကိုအောင်ဝင်းအောင်၏ လက်နှစ်ဖက်၊ ပခုံးနှင့် ပေါင်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ကုသထားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး ဓါးဖြင့်ဝင်ရမ်းကားခဲ့သူကို အရေးယူပေးပါရန် ကိုအောင်ဝင်းအောင်၏ တရားလိုပြု တိုင်တန်းချက်ကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းက (ပ)၃၃၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို စုံစမ်းလျက်ရှိသည်။